Vaovao momba ny indostria |
Fikarakaran'ny mpanjifa +
Rohy Master sy fivoriambe
Fepetra takiana amin'ny lafiny teknika momba ny fiarovana amin'ny CE Certification Hook
avy amin'ny admin tamin'ny 20-08-05
Fitaovana fananganana herinaratra mahery vaika ho an'ny hook, amin'ny 1,5 heny ny isa nomena ho fitsapana ny enta-mavesatra. Ny rafitra fananganana hook ho an'ny herin'ny herinaratra, miaraka amin'ny in-2 isa ny laharana isa ho fitsapana enta-mavesatra. Esory ny fitsapana ny enta-mavesatra, tsy tokony hisy kilema miharihary ary hampitombo ny fatran'ny fahasimbana, ny o ...
Matte Black Bow Type Anchor Shackle misy Screw Pin
Matte black anchor shackle namboarina miaraka amin'ny singa fiarovana 6 heny ho an'ny fananganana sehatra Fampiorenana lozisialy ao anatin'izany ny rojo vy, fantsom-baravarana, farango maso, rohy mampifandray, rohy tompony, rojo ambaratonga 8 dia tsy ampiasaina amin'ny indostrian'ny fampiakarana na indostrian'ny solika sy gazy ihany koa, azontsika atao koa izy ireo ho b ...
TORO LALANA 13FOMBA FANAMPINY MOMBA NY SHACKLES
Ny fonosana dia ampiasaina isan'andro amin'ny fampiharana rigging sy load securement isan-karazany. Alohan'ny hampiasanao rojo vy dia misy fitsipika manan-danja sivy tokony ho adidinao. Fitsipika 1: ny fizotran'ny famokarana dia tokony hijery aloha raha misy lesoka amin'ny rojo vy rehetra, lalao maodely, mafy orina ny fifandraisana ...
Ahoana ny fampiasana marina ny rohy master rigging?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-05-22
1. Ny rohy lehibe indrindra ampiasaina amin'ny famolavolana ny antsamotady, ny tadin'ny tadin'ny tariby ary ny tadin'ny fibres dia tokony ho peratra lava. Ho an'ny tranga hafa dia azo ampiasaina peratra boribory. 2. Ny rohy mampifandray dia tokony ho rohy lava na rohy master; 3. Tsy azo atao ny mampiasa indray ny peratra fananganana lesoka aorian'ny fametahana; 4. Ny ...
Ahoana ny fomba hisorohana ny vaton-vatofantsika sy ny rojo vy tsy ho vaky?
Ny iray amin'ireo fenitra famonosana rojom-baravarana dia ny fisian'ny triatra sy triatra mahery. Mampijaly olona maro ity tranga ity. Ahoana no ahafahantsika misoroka izany tsy hitranga? 1. Araka ny toerana fampiasana, safidio ny antsamotady ny mombamomba azy manokana sy ny maodely, fenoy ny fisoratana anarana ...
Ahoana no hitazomana ny rojo fanandratana ny grade 80 mandritra ny fotoana fiasana maharitra?
Ny fikojakojana ny rojo fananganana G80 dia zava-dehibe, amporisihanay ity fikojakojana manaraka ity ho an'ny rojo fananganana: 1. Ny sprocket dia tokony hapetraka amin'ny hazo tsy misy fikororohana sy savily. Ao amin'ny fivorian'ny fampitana. Ny tarehy faran'ny sprockets roa dia tokony ho amin'ny fiaramanidina iray ihany. Rehefa ny c ...
Address: Donglv Industrial area, Baoding City, Hebei, Sina